China Huge New Truck Tire Inner Tube Heavy Duty Snow Tube mveliso kunye nabenzi | Umgangatho
I-Huge entsha yeTirhu eyiTyhubhu engaphakathi yeTyhubhu esindayo yeTyhubhu enkulu
I-44inch Hard Tube yeTyhubhu ene-Nylon Cover
I-15inch Car iTire yangaphakathi Tube 175 / 185R15
I-Butyl yemoto engaphakathi kwiTyhubhu 175 / 185r14 yeCar Tire
Iinkuphelostencils iTire Korea Butyl ngaphakathi ityhubhu 11.00-20
1000R20 1000-20 Iinkuphelostencils iTire Lwangaphakathi Tube
Ityhubhu yeButyl 1200-20
700x25C Butyl ngerabha Bicycle Amavili Tube engaphakathi Tube Ro ...
Ukutyibilika kwekhephu sisisombululo esikhulu, esilungele abantu abadala kunye nabantwana kwizilayidi ezincinci. Ukutyibilika kuthambisa ukubetha kumaqhuma kwaye kunika intwasahlobo ehlekisayo xa usihla. Olu lulwandle lolonwabo kunye nolonwabo!
Ikhephu tubing sisisombululo esikhulu, esilungele abantu abadala kunye nabantwana kwizilayidi ezincinci. Ukutyibilika kuthambisa ukubetha kumaqhuma kwaye kunika intwasahlobo ehlekisayo xa usihla. Olu lulwandle lolonwabo kunye nolonwabo!
Ubungakanani 70cm, 80cm, 90cm, 100cm, 120cm
Izinto zokumboza Ikhava yengubo ngePVC ezantsi; Ikhava yengubo ngerabha ezantsi
Izinto zangaphakathi zeTyhubhu I-Butyl
Umbala Njengoko isicelo sakho
Ukusetyenziswa Abantwana, abantu abadala kunye nendoda etyebileyo
Iphakheji Iingxowa ezilukiweyo kunye neebhokisi
Details Iinkcukacha zeMveliso kunye neNzuzo:
Ityhubhu yethu yekhephu yenzelwe ukonwaba unyaka ujikeleze zombini zityibilika iinduli kwaye zidada emanzini. Umbhobho werabha owomeleleyo ucocekile kakhulu nokuba uyaphumla emanzini okanye ubhabha phantsi kwentaba egqunywe likhephu. Into ekufuneka uyenzile kukususa ityhubhu ebhokisini, uyifuthise ngomoya, kwaye ulonwabo maluqale.
Umphezulu ityhubhu ngelaphu phezulu yakhiwe onzima-umsebenzi 600 denier ipholiyesta okanye uphucule wenayiloni 1000 denier, kwaye lo mbandela amanzi ehlasela, ukungunda ukumelana, kunye UV ikhuselwe
Izibambo zenkxaso kunye nentambo yokutsala zenziwe ngomtya onzima womsebenzi we-polyester umtya onamandla aphezulu kwaye uqine kwaye ukhuselekile.
Xa ubhabha phantsi iinduli, ufuna into yokubamba. Ngesandla esomeleleyo kakhulu esinokubamba nokuba zinezona mittens zininzi, uya kuziva ukhuselekile njengoko ubaleka ukubona ukuba ngubani onokufumana awona mafutha.
Ezantsi irabha: iityhubhu zethu zekhephu ziya kuhlala iminyaka kunye nezantsi kunye neerabha inflatable tube.Ngaphaya kobomi obude, ezantsi zeplast zikunika isantya esikhawulezayo.
Umgangatho wePVC: uthandwa kakhulu eRashiya.
Ingasetyenziselwa ukuskiya kunye nokuhambahamba
Ityhubhu yomsebenzi onzima wekhephu, yeka ukuthenga ityhubhu entsha yekhephu kuba bayakrazula okanye bafumane umngxunya.Yahlukile kwirabha yendalo, ityhubhu yebutyl ngaphandle kokunuka okunamandla, ayinabungozi empilweni.
Imibala eyahlukeneyo onokuyikhetha kwaye sinokuprinta ilogo yakho kwiphepha elingaphandle
Iimveliso zidlulile "i-CCC" yaseTshayina, i-American "DOT", i-European "EN71" kunye ne "PAHS", ngaxeshanye, ishishini sele lidlulile kulawulo lomgangatho Izatifikethi zeNkqubo "ISO9001", iZatifikethi zeNkqubo yolawulo lokusiNgqongileyo "ISO14001"
1.Q: Ngaba uyiFektri okanye inkampani yokuThengisa?
A: Singabantu abaqeqeshiweyo bokuvelisa abaneminyaka engaphezu kwama-20 yamava ekuthumeleni nasekwenzeni imveliso.
2.Q: Ngaba i-OEM iyafumaneka?
A: Ewe, i-OEM iyafumaneka, singenza ngokweBrand, Ukupakisha, Ubunzima bakho njalo njalo.
3.Q: Leliphi ixesha lokuhambisa?
A: kwiintsuku ezili-15 ukuya ku-30 ​​emva kokufumana i-30% yediphozithi.
4.Q: Unokwenza ntoni ngezinto ezaphukileyo? Ngaba uya kubuyekeza izinto ngokungasebenzi kakuhle?
A: Sineenkqubo zokumisela umgangatho opheleleyo .Xa ufumana nayiphi na ingxaki esemgangathweni (ngaphandle kokulimala kwesixhobo esibukhali, i-asidi kunye ne-alkali corrosion kunye ne-UV engapheliyo), Nceda uthathe iifoto kwaye uzithumele kuthi, kwaye injineli yethu iya kujonga. yingxaki yethu yekhamera, siya kwenza imbuyekezo ehambelanayo.
5.Q: Iisampulu zamkelwe kakuhle, iimvavanyo zibonise iziphumo ezilungileyo, indlela yokuqinisekisa ukuba zonke iiodolo zikumgangatho ofanayo?
A: Sukuba nexhala. Ubungakanani beodolo bufana neesampulu. Kungenxa yokuba isampulu ithathwa kwimveliso yesambuku.
◎ Iinkcukacha zonxibelelwano
Shary apha, ndingathanda ukwakha ubudlelwane bexesha elide kunye nawe. Wamkelekile ukuza kuthi, nayiphi na imibuzo yakho iya kuphendulwa kwisithuba seeyure ezili-12.
Nawuphi na umbuzo, nceda undazise ngokukhululekileyo, ndiya kuhlala ndikwinkonzo yakho ^ _ ^
I-QINGDAO FLORESCENCE, UMlingane WAKHO OBALASELEYO !!!
Nxibelelana: Shary Li
I-Facebook: + 86-18205329398
Ihlokondiba / i-WhatsApp: + 86-18205329398
Egqithileyo I-15inch Car iTire yangaphakathi Tube 175 / 185R15
Okulandelayo: I-44inch Hard Tube yeTyhubhu ene-Nylon Cover
Tube yangaphakathi iTire blower iTire
Ikhephu blower iTire Tube
Amavili ekhephu kunye neTyhubhu
Ityhubhu yekhephu enoKhuseleko lwe-PVC
Ngaphandle kweNdlela OTR iTire Tube yangaphakathi 23.5-25 26.5-2 ...
700x25C Butyl ngerabha Bicycle Amavili Inner Tube F ...
Ibhokisi yerabha yeSithuthuthu engaphakathi kwiTyhuthuthu ...
Itrektara yefama ityhubhu ngaphakathi iityhubhu 16.9-30